के तपाईलाई थाहा छ ? से’क्सका य’ती धेरै फा’इदा ! – Ujyaalo Patrika
के तपाईलाई थाहा छ ? से’क्सका य’ती धेरै फा’इदा !
यौ’ न क्रि’ याकलापमा पुरुषहरूले अलि बढी रुचि राख्ने गरेको देखिन्छ। भनिन्छ– ६० वर्षभन्दा कम उमेरका पुरुषले दिनहुँ कम्तीमा एक पटक यौ’ नबारे सोचेका हुन्छन्। यौ’ न क्रि ’याकलापले मानिसको तना’ व कम गर्छ। क्या’ न्सर र हृ द’याघातको जो’खि म घटाउँछ। दम्पतीबीच आत्मीयता बढाई आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ।
नियमित यौ’ न क्रि या’कलापले भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउने हुनाले मुटुको स्वास्थ्य ठीक रहन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त’ना,व घटाउँछ। दुखाइ कम गर्छ। मानिसको आयु पनि बढाउँछ। एक अध्ययनअनुसार कहिलेकाहीँ यौ,’न स,’म्पर्क राख्ने व्यक्तिमा भन्दा हप्तामा कम्तीमा दुई पटक यौ’न स’म्बन्ध राख्ने व्यक्तिमा यौ’न क्रि’याको क्रममा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने डाइहाइड्रोपिएन्ड्रोस्टेरोन नामक ह,’र्मोन उत्पादन बढी हुन्छ।
यस हर्मो’,नले छाला र शारीरिक तन्तु तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गरी आयु लम्ब्याउने काम गर्छ। त्यसै गरी, यौ,’न का,’र्यले रक्त’सञ्चार बढाउने, निद्रा राम्रो पार्ने, शरीर तगडा राख्ने, डि,’प्रेसन घ’,टाउने गर्छ।
बिहानीपख यौ,’न सम्प,’र्क राखेका व्यक्तिमा दिनभरको त,नाव झे’,ल्न सक्ने क्षमता बढी पाइएको छ। सफल यौ’,न कार्यले अफिसलगायत बाह्य वातावरणका कार्यमा उत्पन्न हुने मान,’सिक त,’नाव मात्र नभई दम्पतीबीच हल्का ठाक,’ठुक वा झग,’डालाई पनि ठीक पार्न सक्छ। प्राक्क्री,’डाका क्रममा गरिने यौ,’न क्रिया,’कलापले जस्तोसुकै त,’नावलाई कम गर्छ।
हप्तामा कम्तीमा एक पटक यौ,’न सम्प,’र्क राख्दा उत्पादन हुने हर्मोनले मुटु, मस्तिष्कलाई सदैव ताजा अवस्थामा राख्छ। हप्तामा तीन वा सोभन्दा बढी पटक यौ,’न सम्ब’न्ध राख्ने व्यक्तिमा हृद,’याघात एवं मस्तिष्का’,घातको सम्भावना ५० प्रतिशतले कम हुन्छ। जुनसुकै उमेरको व्यक्तिमा नियमित यौ, न का,’र्यले राम्रो अनुभूति दिलाउने इन्डोफिर्न ह,’र्मोनको उत्पादन गराउँछ।
कति पटक यौ,’न स,’म्पर्क राख्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले उत्तम हुन्छ भन्ने सवालमा यति नै पटक भन्ने निश्चित उत्तर छैन। तर, अर्काइभ अफ से,’क्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित एक लेखअनुसार औसतमा मानिसले वर्षमा ५४ पटक अर्थात् मोटामोटी हप्तामा एक पटक यौ,’न स’म्बन्ध राख्ने गरेको पाइयो। त्यसो त यौ’न का’र्यले मानिसको शारीरिक हाउभाउमा खासै फरक ल्याउँदैन। त्यसै गरी, शारीरिक वृद्धि र यौ,’न सम्प’र्कबीच पनि कुनै सम्बन्ध छैन। तर, यौ,न क्रियाकलापको परिणाम स्वरूपको गर्भावस्थाले भने महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
यौ’,न कार्यले शारीरिक तौल बढाउँदैन। तर, से’,क्स हर्मोनको अदलाबदलीले चाहिँ शारीरिक तौलमा प्रभाव पार्न सक्छ। यौ’,न स’,म्पर्कसँग से’,क्स ह’,र्मोन असन्तुलनको कुनै सम्बन्ध छैन। तर, डाइहाइड्रोपिएन्ड्रोस्टेरोनको कमी भयो भने शा,’रीरिक तौल बढ्न सक्छ। यौ,’न क्रि,’याको क्रममा निस्किने प्रोल्याक्टिन ह,र्मोनले नि,द्रा लगाउन मद्दत गर्छ। जनावरमा गरिएको एक परीक्षणबाट प्रोल्याक्टिन र निद्राबीचको सम्बन्ध देखाएको छ। यसै गरी, क्यालिफोर्नियाका एक मनोचिकित्सकका अनुसार प्रोल्याक्टिन ह,’र्मोनले मानिसलाई आराम महसुस गराउँछ र लोलाउन सघाउँछ।
अमेरिकाको विल्किस विश्वविद्यालयमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार कहिलेकाहीँ यौ,’न स’,म्पर्क राख्ने व्यक्तिमा भन्दा हप्तामै एक, दुई पटक यौ’,न सम्ब’न्ध राख्ने व्यक्तिको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक तत्त्व (एन्टिबडी) बढी पाइएको छ। नियमित से’,क्स’ले यो,’नि र यो’,निमार्ग ओसिलो (चि,’प्लो) बनाइराख्न, यो,’निलगायत स्त्री जन’नेन्द्रियमा रक्तप्र’वाह बढाउन, यो,’निमार्गको लचकता बढाउन सघाउने हुनाले महिलाका लागि पनि यौ,’न क्रि,’या राम्रो हो।
यौ,’न गतिविधिमा प्रतिमिनेट कम्तीमा पाँच क्यालोरी खर्च हुन्छ, जुन टीभी हेर्नभन्दा चार क्यालोरीले बढी हो। यौ,’न क्रि,’याकलापको क्रममा प्राक्क्री,’डा अनि यौ’,नका क्रममा मुटुको चाल बढ्ने, अनेक थरीका मांसपेशी प्रयोगमा आउने हुनाले क्यालोरी खर्च हुन मद्दत पुग्छ। यसै गरी, करिब ३० प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा पिसा’,ब चु’,हिने सम’,स्या भोग्छन्। यौ’,न क्रि,’या एवं चर,’मसुखको बेला हुने मांसपेशीको संकुचनले पि,’साब चु’,हिने समस्या’मा कमी ल्याउन सघाउँछ।
यौ,’न का,’र्यले इस्ट्रोजेन र टेस्टोस्टेरोन हर्मो’नलाई सन्तुलनमा राख्न सघाउँछ। जसले गर्दा हड्डी खिइने र मुटुसम्बन्धी सम’स्यामा कमी आउँछ। यौ,’न क्रि,’याको क्रममा प्राप्त हुने चर’,मसुखले पीडा कम गरिदिन्छ। एक अध्ययनअनुसार यौ’,न क्रि,’याको क्रममा उत्पादित हर्मोनले पीडा खप्ने क्षमता बढाउँछ।
यो’,नि वा भ’,गांकुर चलाई यौ’न, उत्ते,’जनामा आउँदा जीर्ण खालका तथा जोर्नी दु’,ख्ने सम’स्यामा कमी आउने गरेको पाइएको छ। त्यसैले पनि होला, कतिपय महिलाले महि’नावारीको बेला तल्लो पेट दुख्ने सम’,स्या, जोर्नी पीडा र टाउको दुखा’इबाट छुटकारा पाउन ह’,स्तमै’थुन गर्ने गरेको पाइएको छ।
जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा २१ पटक वी,’र्य स्ख’,लन भएको खण्डमा प्रोस्टेटको क्या’न्सरको जोखिम कम हुने रहेछ। वी’,र्य स्ख,’लन हुने प्रक्रिया यौ’,न स’,म्पर्क, ह’,स्तमै’थुन वा स्व’प्नदोष पनि हुन सक्छ। यौ,’न क्रि’,याकलापका क्रममा हुने स्पर्श तथा आलिं’गनले रमाइलो अनुभूति गराउने ह’र्मोनको उत्पादन बढ्ने हुनाले यौ’,न का’र्यले आत्मीयता एवं आत्मविश्वास बढाई मान्छेलाई खुशी दिन्छ।
अनुशासित एवं मर्यादित यौ’न कार्यले एचआईभीलगायत यौ’न रोग स’र्ने, यौ,’न अ,प’राध, अ’प्राकृतिक यौ,’न क्रि,याक’लापजस्ता सम’स्या हुन दिँदैन। तर, अधिक यौ,’न कार्यले हा,’नि पुर्‍याउन सक्छ। अधिक यौ,’न कार्यले यो’निमार्ग तथा पिसा’बथैलीको सं,क्र’मण हुन सक्छ।
भर्खरै विवाहित दम्पतीमा बढी यौ,’न क्रियाका कारण हुने पि,’साबको सम’स्यालाई ‘ह’निमुन सिस्टाइटिस’ भनिन्छ। यौ,’न क्री,डा’को बेला बढी घ,र्ष’णले यो’निमार्ग तथा म’ल,द्वारका ब्याक्टेरियालाई पि,सा’ब थैली एवं माथिल्लो मू’त्र प्रणालीमा जान सघाई पि’साबको सं’क्र,मण गराउन सक्छ।
डा. सुमनराज ताम्राकार/सम्पुर्ण वीक्ली
Previous होशियार ! धेरै वि,र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ..
Next यस्तो ठाउँ जहाँ पुरुष नपाएर छट्पटाउँछन युवती